Vamwe mikuru dzidziso meseji. BNL Ministries - sn02
Vamwe mikuru dzidziso meseji.
Pakutanga Evha haana kudya apuro. Akaita bonde.
“NdiAdamu?” unoti. Kwete. Adamu aive murume wake. Yakanga iri nenyoka. Nyoka (Serpent) yakanga isiri nyoka.
Akava nyoka mushure Mwari mutuki iye (Genesisi 3:17). Iye aive mhuka yakatwasuka yaigona kutaura, uye ane mbeu yake inogona kusangana nezai remukadzi. Vamwe vangamuti iye “chinoshayikwa Link” kunyangwe Mwari akasika zvose zvipenyu, kusanganisira nyoka. Mhedzisiro yemubatanidzwa uyu yaive Kaini, bhaibheri rinoti iye 'wa' wakaipa. Izvi zvinoreva “kuberekwa kubva”.
Kutukwa kwaEvha kwaive kurwadziwa mukuzvara mwana. Ichi chaive chikonzero chekuti Kristu aifanirwa kuzvarwa “nemhandara” - kupfuudza genetics yerudzi rwevanhu yakasangana nenyoka. Kutukwa kwenyoka kwaive “pamimba yako uchaenda”. Apa ndipo paakazova nyoka. Bhaibheri rakati “Noa akanga akakwana muchizvarwa chake”. Iye akange akanaka pakati pevezera rake, wakange wokupedzisira purebred mwanakomana waMwari. Kubvira ipapo genetics wevanhu yave zvose kukanganiswa. Mwari akaudza mukadzi kuti mbeu yake (Kristu) angadai kukurira mbeu yenyoka.
“Uye Adhamu akatumidza mukadzi wake kuti Evha, nokuti aizova mai vavapenyu vose.”
Adhamu anga asiri baba vevapenyu vese.
Dhawunirodha (PDF Chirungu). Serpent's Seed.
Vanhu vazhinji vanotenda kuti Mwari anoumbwa nevanhu vatatu. Baba, Mwanakomana neMweya Mutsvene. Ndiri baba, mwanakomana, uye munhu wenyama. Asi ini chete tine 1 zita. Izvo "mahofisi" ababa, mwanakomana uye munhu, zvinoenderana nehukama nevamwe. Mwari akafanana. MuTestamente Yakare Mwari aiva noukama kwatiri sezvo 'Baba'. Paakaratidzwa pasi seMuponesi wedu (Imanueri), ainzi 'Mwanakomana waMwari' uye kubva pakavambwa kereke pazuva rePentekosti (Mabasa 2) Akava Mweya Mutsvene anogara muchechi Yake. Iye munhu mumwechete zvakadaro, watinodaidza kuti Jesu Kristu.
Pauro mupostori anosangana naye rimwe zuva sechiedza chinopenya kupfuura masikati machena zuva (Mabasa 9). Pauro akati "Ndiwe ani Ishe?". Pauro aiva muJudha, uye aiziva kuti chiedza ndiye mumwe chete akatungamira vana veIsrael kubuda muEjipitori. Akamuti Ishe. Ishe ndokuti shure “Ndini Jesu.”
Dhawunirodha (PDF Chirungu)
Kubhabhatidzwa - 1933.
Rubhabhatidzo rwemvura, rwairatidza kuti hupenyu hwedu hwekare hwaive akafa uye akavigwa, uye kuti ikozvino tinogamuchira hupenyu hwaKristu matiri. Izvi zvakanga zvizere kunyudza, kwete rokusasa, nekushandisa zita raIshe Jesu Kristu, kwete madunhurirwa aBaba, Mwanakomana uye Mudzimu Mutsvene, anoshandiswa nemakereke. Iri raiva dzidziso mukatorike uye maprotestant vachangoramba vachishandisa icho. Izvi zvinodaro nekuti izita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene ndiIshe Jesu Kristu. Munhu wese kuti akabhabhatidzwa mubhuku reMabasa rakanga muzita iri.
Ndino fananidza izvi nemuchato, apo musikana haaroore mukomana, mwanakomana, uye munhu, kunyangwe zvese izvo zvinhu zviri zvechokwadi, asi vanotora zita rake.
Ona Kubhabhatidzwa Mumvura kune rumwe ruzivo.
Kuroora uye Kurambana.
Hama Branham vanotanga uyu mharidzo nekutsanangura kune zvikoro zviviri zvekufunga. Izvi ndezveMutemo, neCalvinism uye kuti zvese zviri zviviri hazvina kunaka. Machechi mazhinji akasimba pamutemo, asi chinofanira kuyeukwa kuti pane chimiro chenyasha.
Nepo kutsvaka Jehovha shoko iri muzvikomo pamusoro kuTucson, Shongwe yeMoto yakaonekwa ichikwira nekudzika pamusoro apo paainamata. Vana vechikoro vakabvumidzwa kubva kuchikoro kuti vaone chiitiko ichi.
Ona The Acts of the Prophet - Chapter 13 - God is Light.
Dhawunirodha (PDF Chirungu) Marriage and Divorce
Kukundikana kweChechi Yakarongeka.
Izwi rekuti “Kereke” rinoreva “vakadanwa”. Chii chatinodaidzwa kubva?
Ekisodo yekutanga yaive apo Mosesi paakashevedzera Rudzi kubva mukati merudzi.
Ekisodho yechipiri ndipo apo Kristu akadanidzira Chechi kubva mukati Chitendero.
Ekisodo yechitatu ndipo Kristu pavanodaidza Mwenga kubva mukati meChechi.
Asi pazuva rakabuda Roti muSodhomu, moto nesuriferi zvakanaya, zvichibva kudenga zvikavaparadza vose.
“Zvichaita saizvozvo pazuva iro Mwanakomana woMunhu acharatidzwa.”
Dhawunirodha (PDF Chirungu)...